B.M.T.A Burmese Migrant Teachers' Association | Just another WordPress.com weblog
Posted on October 20, 2015 by bmta05
Posted in ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်, Burmese pages only	| Leaveacomment
Posted on July 17, 2015 by bmta05
Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) training closing ceremony was successfully held on July 15th 2015 at BPHWT health worker team training room.
The training was started on 5th July and it is 10 days, 60 hours training which providing teaching methods base on the student center approach for their critical thinking.
RWCT training was conduct by Burmese Migrant Teachers Association (BMTA) and Thinking Classroom Foundation.
Thinking class room foundation isamember of the Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium (RWCT-IC) and the RWCT-IC is an institutional membership organization expanding global community of educators collaborating across cultures and boundaries to enhance understanding of teaching and learning by engaging teachers and learners in critical reflection (www.rwctic.org).
RWCT-IC promotes and implements critical thinking across the educational spectrum around the world.
There are 35 participants from 17 Migrant Learning Centers (MLC) from Tak province, Thailand attended the training, and three RWCT trainers from Thinking Classroom Foundation leaded the training.
During the training, the teachers learned different teaching methods by practicing teamwork, pair work, group activities and individual assignments.
The training also have included the agendas of role play, review teaching strategies, reading conference, biodiversity, free write, moral judgment, geometry walk, guided reading, and critical question etc.
BMTA has been regularly providing RWCT training cooperating with Thinking Classroom Foundation sine 2007 to date.
Posted in Action movement, English pages only	| Leaveacomment
Posted on January 31, 2015 by bmta05
Posted in ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်	| Leaveacomment
Posted on October 13, 2013 by bmta05
BMTA announcement 10h OCT 2013 _ Final_
နေ့စွဲ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းနှင့် ပြည်တွင်းစစ် အရှိန်မြင့်မားလာမှုများကြောင့် ပြည်တွင်း နေရာ ဒေသ အသီးသီးမှ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ် သမားများနှင့် ပြည်တွင်းစစ် ဒဏ်ကြောင့် နေရာဒေသများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော ဒုက္ခသည်များသည် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှ တစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း သို့ ရွှေ့ပြောင်း လာရောက် နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ပါဝင်လာကြသော ကျောင်းနေရွယ် ကလေးများအ တွက် ယခုအခါတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းပေါင်း (၁၃၀) ကျော် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၄၀၀၀၀) ကျော် ပညာသင်ကြားနေကြပါသည်။
ထိုကျောင်းများ၏ အဓိက တန်ဖိုးမှာ ကလေးများအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာ သင်ကြား နိုင်ခွင့်ရရှိ ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုများ အပါအဝင် ကလေးအခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံရမှုများ၊ ရာဇဝတ်မှု နှင့် မကင်းသော မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုများ အပါအဝင် ကလေးငယ်များကို အလွဲအသုံးပြု ခံရခြင်းများမှ ကင်းဝေးစေသည့်အပြင် မိဘများ အလုပ်လုပ်ကိုင် နေချိန်တွင် ကလေးငယ်များအတွက် လုံခြုံ ဘေးကင်းမှု အရှိဆုံးအိမ် (Safe house) များအဖြစ် ရပ်တည် ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီး ကလေးများ၏ အသိဥာဏ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် နိုင်ငံသား အသိစိတ်ဓါတ် အတွေးအခေါ်များ မြင့်မား လာစေရေးအတွက် သင်ကြားပေးရာ ဌာနကြီးများအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ သင်ကြားမှုဆိုင်ရာအရည်အသွေးများကိုလည်း ဒေသ အသီးသီးရှိ ထိုင်းနိုင်ငံ ပညာရေး ဌာနများ၊ နိုင်ငံတကာ ပညာရေး အဖွဲ့များ ဒေသတွင်း ပညာရေး အဖွဲ့များ၏ သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ပညာရေးနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ များဖြင့် အရည်အသွေး မြှင့်တင်ပေး နိုင်ခဲ့ပါသည်။
အထက်တန်းလွန် အဆင့်တွင် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု GED exam ကဲ့သို့သော program များ၊ ထိုင်းသက်ကြီး ပညာရေး (သို့မဟုတ်) အဝေးသင် ပညာရေး ကော်ဆော်နောနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု အထက်တန်း အောင်လက်မှတ် ရယူမှု အစီအစဉ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ၁၀ တန်းဖြေဆိုသည့် အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အတန်းအလိုက်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းဒေသ အားလုံးကို လွှမ်းခြုံနိုင်မှု မရှိသေးပါ။
အထူးသဖြင့် အငယ်တန်းအဆင့်များတွင် ထိုင်းကျောင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် School within School program သာရှိပြီး၊ ထိုအစီအစဉ်မှာလည်း စမ်းသပ် ကာလ အနေအထားပင် ရှိနေပါသေးသည်။ ကျောင်းနေရွယ် ကလေးများအားလုံး ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးပေါ်လစီကို ချမှတ်ထားသော ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရကျောင်း များတွင်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မာ ကလေးငယ်အားလုံး တက်ရောက်နိုင်သည့် အခြေအနေလည်း မရှိ သလို မြန်မာပြည်ပြန်မည့် ကလေးငယ်များ အတွက် မြန်မာပညာရေးနှင့် ပြန်လည် ဆက်စပ်ရန်အတွက် ထုတ်ပြန်ချက်များ ပြုလုပ်ထားသော်လည်း ပြည်တွင်းဒေသအားလုံးတွင် တပြေး ညီ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိသေးပါ။
လက်ရှိအခြေအနေတွင်မူ ထိုင်းနိုင်ငံဒေသ အသီးသီးရှိ ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းများသည် လုံခြုံမှုနှင့် ရပ်တည်မှု ဆိုင်ရာ အခက်အခဲ၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ အခက်အခဲ၊ နည်းပညာနှင့် အထောက်အကူများ ရရှိနိုင်မှု အခက်အခဲနှင့် ကလေးများအတွက် အသိအမှတ်ပြု အောင်လက်မှတ်များ ရရှိနိုင်မှု အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေကြရသလို၊ အချို့ကျောင်းများ ပိတ်လိုက်ရသည့် အခြေအနေမျိုးပင်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းများ ပိတ်လိုက်ရခြင်းဖြင့် စာသင်ခန်းများထဲရှိ ကလေးငယ်များ၏ အနာဂတ်သည် ဒုစရိုက်မှုများ၊ လူကုန်ကူးမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုများ၏ သားကောင်များ အဖြစ်သို့ တွန်းပို့ ရောက်ရှိ သွားနိုင်ပြီး အိမ်ရှင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အမိ မြန်မာနိုင်ငံတို့ အတွက် တန်ဖိုးရှိသော လူသား အရင်းအမြစ်များကို ဆုံးရှုံးရမည် ဖြစ်သလို နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် မလိုလားအပ်သော အနာဂတ် အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ သောင်းနှင့်ချီသော ကျောင်းနေရွယ် ရွှေ့ပြောင်းကလေးငယ်များသည် စာသင်ခန်းများနှင့် အလှမ်းဝေး နေဆဲဖြစ်ပြီး ထိုကလေးငယ်များအတွက်လည်း ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးအစီအစဉ်များကဲ့သို့ အစီအစဉ်များ ဆောင် ရွက်ပေးနိုင် ရန် အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါသေးသည်။
မြန်မာ့ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာမများ အစည်းအရုံးသည် စေတနာ၊ ဝါသနာဖြင့် အနစ်နာခံ သင်ကြား ပေးနေကြသော ရွှေ့ပြောင်းဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အစည်းအရုံးဖြစ်သည်နှင့်အညီ ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ပညာရေး၏ အနာဂတ်အတွက် အားနည်းချက်၊ အားသာချက်၊ စိန်ခေါ်မှုများအပေါ် သုံးသပ်ပြီး MEII ၏ ကွန်ယက်တွင်းရှိ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်း ပညာရေးအဖွဲ့များနှင့် ဆွေးနွေးသဘောတူညီချက်များအရ ထိုင်း၊မြန်မာ အစိုးရများ၊ နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များ၊ လက်တွေ့လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေကြသည့် ပညာရေး အဖွဲ့များနှင့် ကျောင်းအသီးသီးသို့ အောက်ပါ အချက်များကို တိုက်တွန်း တောင်းဆို အကြံပြု အပ်ပါသည်။
၁။ ထိုင်းမြန်မာ အစိုးရများအနေဖြင့် ကလေးများ၏ အနာဂတ်အတွက် ပညာရေး အထောက်အပံ့များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဒေသတွင်း စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများကို တိုက်တွန်း တောင်းဆိုပေးခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းပညာရေးအတွက် ပညာရေးရံပုံငွေများချမှတ် ပေးခြင်းများကို ဆောင် ရွက်ပေးပါရန်။
၂။ ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရအနေဖြင့် ပညာရေးသည် အားလုံးအတွက်( Education for all) အစီအစဉ်ဖြင့် မြန်မာ ကလေးငယ်များကို ထိုင်းကျောင်းများတွင် တက်ရောက်ခွင့်ပြုထားသော်လည်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းများတွင် တက်ရောက်နေကြသော ကလေးငယ်များ အတွက်လည်း ထိုင်းပညာရေး စနစ်နှင့် ဆက်စပ်နိုင်ရန် ပိုမို လက်တွေ့ကျသော နည်းလမ်းများ ဖေါ်ဆောင်ပေးစေလိုပါသည်။ ထိုင်း၊မြန်မာ အစိုး ရနှင့် ရွှေ့ပြောင်းပညာရေး တာဝန်ရှိသူများ ညှိနှိုင်းပြီး ကလေးငယ်များအတွက် လူသားချင်းစာနာသော ပညာရေး အသိအမှတ်ပြု ခံရမှုများ ရရှိစေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်း တောင်းဆို အပ်ပါသည်။
၃။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းကျောင်းများကို မြန်မာ၊ ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု နှင့် အသိအမှတ်ပြုမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန်။
၄။ အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ကလေးများကို သက်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တက္ကသိုလ် /ကောလိပ်များတွင် ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိစေရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
၅။ ကျောင်းနေရန် အခက်အခဲ ရှိနေသေးသည့် ကလေးငယ်များအတွက် ပညာသင်ကြားပေးနိုင်မည့် ပညာရေး အစီအစဉ်များကို ရွှေ့ပြောင်းပညာရေး တာဝန်ရှိသူများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ် သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ထိုင်း၊ မြန်မာ အစိုးရများကပါ အစီအစဉ်များချမှတ် အကောင်အထည် ဖေါ် ပေးရန်။
၆။ ရွှေ့ပြောင်းကလေးငယ်များတွင်လည်း မတူညီသော ဘ၀နောက်ခံ၊ မတူညီသော ကျောင်းပညာရေး၊ မတူညီသော အသိပညာနှင့် မတူညီသော အတွေး အမြင်တို့ကို အခြေခံသည့် ရွှေ့ပြောင်း လူမှုဘ၀များအတွက် ပိုမို သင့်လျော်၊ အပ်စပ်သော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတို့ကို မြန်မာပြည်တွင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် နိုင်ငံတကာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတို့ကို အခြေခံလျက် သင့်တော်သော အသိပညာများနှင့် အနာဂတ်ဘ၀တို့ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားလျှက် သင်ရိုးများကို ညှိနှိုင်းပြီး ယဉ်ကျေးမှုအသီးသီးကို သဟဇာတဖြစ်စေလျှက် ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှုကို ထွန်းကား စေသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်း များ ဖြစ်ပေါ်လာရေး အားပေးကူညီ အသိအမှတ်ပြုပေးပါရန်။
၆။ ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းများတွင် တက်ရောက်နေသော ကလေးငယ်များ၏ ပညာရည် တိုးတက်မှု အတွက် အသိအမှတ်ပြု သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ၊ တိကျသော စစ်ဆေးမှုများနှင့် အသိအမှတ်ပြုနိုင်သော အောင်လက်မှတ်တို့ကို လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာသင်ရိုးအပေါ် အခြေပြု၍ မွမ်းမံထား သည့် စာသင်ကျောင်းများမှ ကလေးငယ်များမှာ ပြည်တွင်း ပညာရေးစနစ်တွင် ဆက်လက် သင်ကြား နိုင်ရန်အတွက် အသိအမှတ်ပြုမှုများ၊ ပံ့ပိုး ကူညီမှုများ လိုအပ် လျှက် ရှိနေပါသည်။
၇။ အမိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ် ပညာရေးပေါ်လစီတွင် ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ကလေးငယ်များအတွက် ရွှေ့ပြောင်း ဒေသ တစ်ခုလုံး၏ ပညာရေးအဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး အတန်းအလိုက် တပြေးညီ စစ်ဆေးမှုနှင့် စံနှုန်းများ ချမှတ်ပေးရန၊် ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းများအားလုံး၏ ကိုယ်စားပြုကော်မတီ တစ်ရပ်ရပ်မှ စစ်ဆေးထောက်ခံသည့် အောင်လက်မှတ်များကို တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အသိအမှတ်ပြုရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းများသို့ မိမိတို့ အောင်မြင်သည့် အတန်းအလိုက် ပြန်လည် တက်ရာက်နိုင်ခွင့်ရရှိရန်၊ အဆင့်မြင့်ပညာများ ဆက်လက် သင်ကြားခွင့်ရရန်၊ ကလေးများ အတွက် နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ အသိ အမှတ်ပြုမှုများ ရရှိနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၈။ လုပ်ခလစာနည်းပါးစွာဖြင့် အနစ်နာခံ စာသင်ကြားပေးနေကြသည့် ဆရာ၊ဆရာမများ အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု၊ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ရရှိနိုင်ရန် နည်းလမ်းများ ဖေါ်ဆောင်ပေးမှုကို မြန်မာ၊ ထိုင်း အစိုးရ အသီးသီး အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း အနေဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပြီး၊ ပြည်တော်ပြန် ရွှေ့ပြောင်းဆရာ၊ ဆရာမများ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ၊ အရည်အချင်း လုပ်သက်များအလိုက် အသိအမှတ်ပြုမှု၊ တာဝန်ပေးအပ်မှုများဖြင့် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါကြောင်း တိုက်တွန်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။
၉။ ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းဆရာဆရာမများကို ကိုယ်စားပြုသည့် လွတ်လပ်သော ဆရာ၊ ဆရာမ အသင်း အဖွဲ့များကို ရွှေ့ပြောင်းဒေသ အသီးသီးတွင် ဖွဲ့စည်း ထူထောင်သွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ထိုဆရာဆရာမများကို ကိုယ်စားပြုသည့် လွတ်လပ်သော အသင်းအဖွဲ့များ၏ စုစည်းမှုဖြင့်သာလျှင် ရွှေ့ပြောင်း ကလေးငယ်များအတွက် ပညာရေးအခွင့်အရေးများ ပိုမိုရရှိလာ မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသား ကလေးငယ်များ အားလုံး မည်သည့်နေရာတွင် ရောက်ရှိ နေစေကာမူ ဒေသတွင်းရှိ အနာဂတ် လူသားအရင်းအမြစ်များ မဆုံးရှုံးစေရန်အတွက် ပညာ သင်ကြားခွင့်နှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိစေရန် ထိုင်း၊ မြန်မာ အစိုးရနှစ်ရပ်လုံးမှ ရွှေ့ပြောင်း ပညာရေး တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ထောက်ပံ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်ဟု အကြံပြု တိုက်တွန်းတောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာမများ အစည်းအရုံး
ပူးတွဲပါဝင် တောင်းဆိုသော မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ
– REWC (ရနောင်းဒေသ)
– FED (ဖန်းင ပညာရေးဌာန)
– မဟာချိုင် ဒေသစာသင်ကျောင်း (၂) ကျောင်း
Mee Eain Shin Development Foundation school ( MDF), DCLC school (ဘန်ကောက်)
– Beam Education Foundation (ချင်းမိုင်)
– Minmahaw Education Foundation (မဲဆောက်)
– Mae Tao Clinic (Child Protection)
– Committee for Protection and Promoting Child Rights (CPPCR)
– Social Action for Women (SAW)
– Community Council for Migrant Education (CCME)
ယခု ထုတ်ပြန်သည့် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုချက်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၅) ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာများ ညီလာခံ၏ တညီတညွတ်တည်း အတည်ပြုချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
– ဦးနိုင်နိုင်ထွန်း ( အတွင်းရေးမှူး)0875247034
– မန်းရွှေနှင်း ( ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ)0872020584
Posted in Announcement, ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်	| Tagged statement	| Leaveacomment
Posted on October 12, 2013 by bmta05
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တာခ့်ခရိုင်အတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်း ဆရာ၊ဆရာမများ ညီလာခံနှင့် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့က မဲဆောက်မြို့ မယ်တော်ဆေးခန်း၏ သင်တန်း ခမ်းမဆောင်တွင် မြန်မာ့ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာများ အစည်းအရုံး (BMTA) မှ ဦးဆောင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြရာ ထိုင်းနိုင်ငံဒေသ အသီးသီးမှ ပညာရေး ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆရာ၊ဆရာမ စုစုပေါင်း ၇၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ထိုအခမ်းအနားသို့ ၈၈ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အလုပ်သမားရေးရာဌာနမှ ဒေါ်မာမာဦး တက်ရောက်ပြီး ဂုဏ်ပြု အမှာစကား ပြောကြားပေးပြီး၊ ပညာရေးပြုပြင်ပြာင်းလဲမှု နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ယက် (NNER) မှလည်း ဂုဏ်ပြု သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားကို မဲဆောက်မြို့ မယ်ပ တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော Teacher Preparation Center (TPC) ကျောင်းမှ တိုင်းရင်းပေါင်းစုံ သင်တန်းသားများမှ တိုင်းရင်းသား စုံညီအကဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီး၊ BMTA သီချင်းကို စုပေါင်းသီဆိုခြင်းဖြင့် အခမ်းအနားကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာကြသော ထိုင်းနိုင်ငံ ရွှေ့ပြောင်း လာသူများအတွက် ပေါင်းစပ် ပညာရေး ဖေါ်ဆောင်မှု ကော်မတီ (Migrant Education Integration Initiative – MEII) ၏ ကွန်ယက် အဖွဲ့ဝင် များဖြစ်ကြသော ရနောင်း၊ ဖန်းင၊ မဟာချိုင်၊ ချင်းမိုင်၊ ဘန်ကောက်တို့မှ ရွှေ့ပြောင်းပညာရေး အဖွဲ့ အသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်များက ဆရာ၊ဆရာမများကို နူတ်ခွန်းဆက် စကားများ ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
BMTA ဥက္ကဌ ဆရာမန်းရွှေနှင်းက အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားရာတွင် “ယခုနှစ် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆရာ၊ဆရာများ ညီလာခံနှင့် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အခမ်းအနားကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစတင် ကျင်းပခဲ့ရာ၊ ယခုနှစ်သည် (၇) ကြိမ်မြောက် ဖြစ်ပြီး၊ ယခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်မည့် အစည်းအရုံး၏ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းတကျ အလုပ်အမှူဆောင် သစ်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပွဲသည် ၄ ကြိမ်မြောက် ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်”။
၈၈ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ဒေါ်မာမာဦးမှ “ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် သူတို့ သားသမီးးများ၏ ပညာရေးကိစ္စများကို အတွင်း အပြင် ဆက်စပ်၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားကြမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး စနစ်ဖြင့် ကြီးပြင်းလာကြသော ရွှေ့ပြောင်းဒေသ၏ လူသားအရင်းအမြစ် များသည် ပြည်တွင်းတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်” ဟု ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး World Education ၏ ကိုယ်စား ဆရာမ အေမီမှ အားပေးဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ပြီး၊ အဖွဲ့ အစည်း အသီးသီးမှ ပေးပို့လာသော သဝဏ်လွှာများကို ဖတ်ကြားခြင်း၊ BMTA ၏ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားခြင်း၊ BMTA အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြား တင်သွင်းခဲ့ပြီး၊ BMTA၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အခမ်းအနားသို့ တင်ပြသော ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်မူကြမ်းကို ဖတ်ကြား တင်သွင်းခဲ့ရာ အခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်လာကြသော ဆရာ၊ဆရာမများမှ တခဲနက်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
ထိုထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်မူကြမ်းကို အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော ဒေသတွင်း ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိုင်နိုင်ငံ ဒေသ အသီးသီးမှ ပညာရေးကော်မတီများ၏ အစည်းအဝေးတွင် ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွင် ရွှေ့ပြောင်းပညာရေး နောက်ခံသမိုင်း၊ ပကိတိ အခြေအနေ သုံးသပ်ချက် ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ကျောင်းပြင်ပပညာရေး ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် အသိ အမှတ်ပြုမှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်နှင့် ခြုံငုံသုံးသပ် အကြံပြုချက်များ ပါဝင်ပြီး လာမည့် တနင်္လာနေ့ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေငြာသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
နေ့လည်ပိုင်းအစီအစဉ်များတွင် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အကြို ဆရာ၊ဆရာမများ ဘော်လုံးပြိုင်ပွဲဆုများချီးမြှင့်ခြင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ များနှင့် ကျောင်း သား ကျောင်းသူများ၏ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲဆုများချီးမြှင့်ခြင်း၊ သက်ကြီးဝါကြီး ဆရာ၊ဆရာမများကို လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ ပြီးနောက် သက်တမ်း နှစ်နှစ် ပြည့်မြောက်သွားပြီ ဖြစ်သော အလုပ်အမှူဆောင် အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း များနှုတ်ထွက်ခဲ့ကြပြီး နောက်ထပ် နှစ်နှစ်သက်တမ်းကို ဆက်လက်ဦးဆောင်သွားမည့် အလုပ်အမှူဆောင် အဖွဲ့သစ်ကို ဒီမိုကရေစီ နည်းတမ်းတကျ အောင်မြင်စွာရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနောက် အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါ သည်။
အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် မြန်မာ့ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာများ အစည်းအရုံးမှ ပြုလုပ်သော ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အခမ်းအနားသည် UNISCO website ၏ World Teachers’ Day Event တွင် ယမန်နှစ်မှ စတင်ပြီး ဖေါ်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။